Medjugorje: ndị dibia bekee chọpụtara na ọ bụghị aghụghọ | EKPERE NA OZI
Medjugorje: ndi dibia bekee mara na obughi ojoro
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 20, 2020 Septemba 20, 2020
NA MEDJUGORJE Anyị ghọtara na sayensị na ọ bụghị aghụghọ
Nsonaazụ nyocha ahụike-sayensị anyị mere na ndị ọhụụ nke Medjugorje mere ka anyị wezuga usoro ọgwụgwọ ma ọ bụ ịme anwansị ahụ ma yabụ aghụghọ nwere ike. Ọ bụrụ na ha bụ ngosipụta nke Chukwu, ọ bụghị anyị, kama anyị nwere ike ịkọwapụta na ha abụghị nkọwapụta ma ọ bụ nnwale. Prọfesọ Luigi Frigerio bịarutere na nke mbụ ya na Medjugorje na 1982 iji soro onye ọrịa gbakere na akpụ na sacrum. Nkọwapụta ahụ amalitela otu afọ gara aga, mana ama nke ebe ahụ dịpụrụ adịpụ ebe Gospa kwuru pụtara, amalitelarị ịgbasa na Italytali. Frigerio maara n'ezie nke obere obodo dị na Bosnia ma bishọp nke Split nyere ya iwu ịmalite nyocha ahụike sayensị banyere ụmụaka isii ahụ kwuru na ha ga-ahụ ma soro Madonna kwurịta okwu.
Taa, afọ 36 ka e mesịrị, n'etiti diatribe na Medjugorje ee ma ọ bụ ee, nke na-akpali mkparịta ụka Katọlik mgbe okwu Pope Francis kwuchara, ọ laghachitere ịkọ maka ọrụ nyocha ahụ nke emere ozugbo ahụ Ọgbakọ maka Ozizi Okwukwe ahụ. n'aka Kadịnal Ratzinger. Iji gosipụta na enweghị aghụghọ ọ bụla na e mere nyocha ahụ na 1985, yabụ ugbua na ihe, dị ka ọrụ Ruini si kwuo, ga-abụ akụkụ nke abụọ nke ngosipụta, nke kachasị "nsogbu". Mana nke kachasị icheta na ọ nweghị onye gọnahụrụ ọmụmụ ndị ahụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịgbachi nkịtị, Frigerio kpebiri ịgwa ndị Nuova BQ otú nyocha ahụ ndị ọhụụ si gaa.
Prọfesọ, onye ndị otu ahụ mejupụtara?
Anyị bụ otu ndị dọkịta Italiantali: M, onye n'oge ahụ nọ na Mangiagalli, Giacomo Mattalia, dọkịta na-awa na Molinette na Turin, prọfesọ. Giuseppe Bigi, physiopathologist nke Mahadum Milan, dọkịta Giorgio Gagliardi, ọkà n’akparamàgwà mmadụ na akparamaagwa, Paolo Maestri, otolaryngologist, Marco Margnelli, neurophysiologist, Raffaele Pugliese, dọkịta na-awa, Prof Maurizio Santini, neuropsychopharmacologist nke Mahadum Milan.
Kedu ngwá ọrụ ndị ị jiri?
Anyị enweworị akụrụngwa ọkaibe n'oge ahụ: algometer iji mụọ ihe mgbu, ihe abụọ na-eme ka ị metụ cornea, polygraph dị iche iche, onye a na-akpọ onye na-achọpụta ụgha maka ọmụmụ ihe nke oge iku ume, ọbara mgbali, ọnụego obi na dermocutaneous nguzogide na elu vaskụla eruba. Anyị nwekwara ngwaọrụ akpọrọ Ampleid mk 10 maka nyocha nke ụzọ nyocha na nke ocular, mita 709 zuru oke si Amplfon maka ịnụ ụda akwara akwara, cochlea na akwara ihu. N'ikpeazụ ụfọdụ ese foto maka ọmụmụ nke nwa akwụkwọ.
Kedu onye nyere gị ka ị mee nyocha ahụ?
E hiwere otu a na 1984 mgbe ha mechara bishọp nke Split Frane Franic, nke onye isi obodo ya bụ Medjugorje dabere. Ọ jụrụ anyị maka ọmụmụ ihe, o nwere ezi mmasi ịghọta ma ọ bụrụ na ihe ịtụnanya ndị a sitere na Chukwu.ma ọ dị n'aka John Paul II. Mgbe m laghachiri Italytali, Dr. Farina na Fada Cristian Charlot na Msgr Paolo Knilica kwurịtara okwu. Pope St. John Paul II kpọrọ Monsignor Knilica ka ọ dee akwụkwọ nhọpụta nke nyere ndị dọkịta Italiantali aka ị ga parish nke Medjugorie maka nyocha ndị a. E nyefere ihe niile n'aka Ratzinger. Buru n'uche na ọchịchị Tito ka dị, ya mere ọ dị ha mkpa inwe otu ndị dọkịta na mpụga.
Ndi otu gi bu ndi ogwu ahu mbu tinye onu?
N'otu oge na ọmụmụ ihe anyị, a na-eme nyocha nke otu ndị otu French nke Prọfesọ Joyeux University nke Montpellier na-ahazi. A mụrụ otu a site na mmasị nke onye ama ama na mariologist Laurentin. Ha nyefere onwe ha ọkachasị n’ihe ọmụmụ ọgụgụ isi. Formsdị ihi ụra ma ọ bụ epilepsy ndị a ewepụtara, ha egosila na isi anya na usoro okike bụ ihe na-adịghị mma.
Olee mgbe e mere nnyocha ahụ?
Anyị mere njem abụọ: otu n’agbata 8 na 10 March 1985, nke abụọ n’agbata 7 na 10 Septemba 1985. N’agba nke mbụ anyị mụrụ nkọ n’egwuregwu na-enwu n’onwe ha na ịtụgharị n’anya nke anya na ntanye anya nke na-esi na ya apụta nkuchianya. Na imetụ cornea anyị ghọtara na ụfọdụ ụdị ịme anwansị nwere ike iwepụ na sayensị, ikekwe site na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, n'ihi na ozugbo ihe ahụ mechara, mmetụta nke anya laghachiri ụkpụrụ nkịtị. O mere ka anyị mata na iku iku anya na-akwụsị tupu ya etinye ihe oyiyi. Ndị ọhụụ isii ahụ nwere nghọtahie nke otu ụzọ n'ụzọ ise nke abụọ, n'ọnọdụ dị iche iche, na idozi otu isi ihe oyiyi ahụ na esemokwu dị iche n'etiti ha, ya mere n'otu oge.
Na ule nke abụọ nke Septemba?
Anyị lekwasịrị anya n'ịmụ banyere ihe mgbu. N'iji algomita, nke bu selita centimita efere nke na-ekpo oku rue ogo 50, anyi meturu akpukpo ahu tupu, n'oge na mgbe ihe puru iche. Ọfọn: tupu na mgbe ndị ọhụụ ahụ wepụrụ mkpịsị aka ha na obere nke abụọ, dị ka akụkụ ahụ si dị, mgbe n'oge ihe ịtụnanya ahụ, ha ghọrọ ndị na-enweghị mmetụta maka mgbu. Anyị gbalịrị ịgbatị mgbasa ozi ahụ karịa 5 sekọnd, mana ịkwụsị iji zere ọkụ. Mmeghachi omume mgbe niile bụ otu: enweghị uche, ọ dịghị usoro ịgbanahụ na mbadamba ọkụ.
Mgbịrị ahụ ọ pụtakwara onwe ya n'akụkụ ndị ọzọ metụtara ahụ?
Imetụ cornea aka na nke kachasị nke 4 milligram na usoro nkịtị, ndị ọhụụ ahụ mechiri anya ha ozugbo; n'oge ihe a na-ahụ anya, anya nọgidere na-emeghe n'agbanyeghị nrụgide ọ bụla karịa 190 milligram nke ibu.
Ọ pụtara na anụ ahụ guzogidere ọbụna nrụgide na-emerụ ahụ?
Ee.Arụ ọrụ electrodermal nke ụmụ nwoke ndị a n'oge ngosipụta ahụ nwere mgbanwe na-aga n'ihu yana mmụba na mgbochi anụ ahụ, a na-eme ka hypertonia nke usoro ihe atụ na-eme ngwa ngwa mgbe ihe omume ahụ gasịrị, site na ụzọ electrodermal enwere enweghị oke anụ ọkụ eletrik. Ma nke a mekwara mgbe anyị ji mkpịsị osisi mee ihe maka ihe mgbu na mberede na mberede ma ọ bụ mgbe anyị jiri ihe osise na-ese foto: electroderma gbanwere, mana ha enweghị mmetụta zuru oke na ọnọdụ ahụ. Ozugbo ikpughe ihe ahụ kwụsịrị, ụkpụrụ na mmeghachi omume na ule ahụ zuru oke.
Ọ bụụrụ gị ule?
Ọ bụ ihe akaebe na ọ bụrụ na enwere nkọwa nke ecstasy, ya bụ, nke ịbụ ihe ewepụrụ site na ọnọdụ bụ, ha anọghị kpamkpam na anụ ahụ. Ọ bụ otu ihe ahụ dọkịta Lourdes hụrụ na Bernadette mgbe ọ nwalere kandụl ahụ. Anyị tinyere otu ụkpụrụ ahụ na nke doro anya na ọmarịcha igwe.
Ozugbo e mere mkpebi ahụ, gịnị ka ị mere?
Mu onwem nyere ndi Cardinal Ratzinger omumu ihe a, nke zuru oke ma soro ya foto. Agara m Ọgbakọ maka Doctrine of the Faith ebe odeakwụkwọ Ratzinger, Kadịnal Bertone n'ọdịnihu, na-eche m. Ratzinger na-anabata ndị nnọchi anya ndị Spen, mana o mere ka ha chere ihe karịrị otu elekere ịgwa m okwu. Akọwaara m ya nkenke ọrụ anyị wee jụọ ya ihe ọ chere banyere ya.
Ọ gwara m: "Ọ ga-ekwe omume na Chineke na-ekpughe onwe ya nye mmadụ site na ahụmahụ nke ụmụ nwoke". Ọ hapụrụ m wee banye n'ọnụ ụzọ m jụrụ ya, sị: "Ma olee otu pope si eche?". Ọ zara: "Pope na-eche dịka m". Laghachi na Milan m bipụtara akwụkwọ na data ndị ahụ.
Kedu maka ụlọ studio gị ugbu a?
Amaghị m, mana amaara m na ọ rụrụ ọgbakọ ahụ na ya mere Holy See iji gbochie njem ala nsọ. Popu chọrọ ịghọta nke a tupu oge eruo, iji wee kpebie ma ọ ga-egbochi njem ala nsọ. Mgbe ha gụsịrị ihe ọmụmụ anyị, ha kpebiri na ha agaghị egbochi ha ma hapụ ha.
Ì chere na ndị ọrụ Ruini nwetara ụlọ ọrụ ahụ?
Echere m ya, mana enweghị m ozi na nke ahụ.
Gịnị mere i ji chee otú ahụ?
N'ihi na anyị kwenyere na ụmụ nwoke ahụ bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na karịsịa kemgbe ọtụtụ afọ ọ nweghị ọmụmụ na-esote na-agbagha ihe anyị chọpụtara.
Na-ekwu na ọ dịghị onye ọkà mmụta sayensị batara iji megide ihe ị na-amụ?
Kpọmkwem. Ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ bụ ma n ’ọhụụ ndị a e kwuru na ha pụtara, ndị ọhụụ hụrụ ihe ha hụrụ ma ọ bụ hụ ihe ha kwenyere. N'okwu nke mbụ a na-asọpụrụ usoro ọmụmụ nke ihe ahụ, na nke abụọ anyị ga-ahụla ka anyị na-eche echiche nke ụdị ọrịa. Na ahụike-sayensị nke anyị nwere ike ịchọpụta na ụmụ nwoke a kwenyere n'ihe ha hụrụ na nke a bụ mmewere na akụkụ nke Holy See ka ọ ghara imechi ahụmịhe a ebe ahụ ma gbochie nleta nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Taa, anyị alọghachila ikwu maka Medjugorje mgbe Pope kwusịrị okwu ya.Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ndị a abụghị nke pụtara na ọ ga-apụta na anyị ga-eche nnukwu aghụghọ wazo afọ 36. Enwere m ike ịchịkwa aghụghọ ahụ: anaghị ekwe ka anyị lee nyocha nke naloxone iji hụ ma ha na-a drugsụ ọgwụ, mana enwerekwa ihe akaebe mbụ mere na mgbe nke abụọ gasịrị, ha nọ na ụfụ dị ka ndị ọzọ.
I kwuru okwu banyere Lourdes. Rapagidesiri ike na usoro nyocha ahụike nke ụlọ ọrụ?
Kpọmkwem. Usoro a nakweere bụ otu. N'ezie, anyị bụ ụlọ ọrụ ahụike na-apụ apụ. Ndị otu anyị gụnyere Dr. Mario Botta, onye bụ akụkụ nke ọrụ sayensị-sayensị nke Lourdes.
Kedu ihe ị chere banyere aparị?
Ihe m nwere ike ikwu bụ na enweghị aghụghọ ọ bụla, enweghị ịme anwansị. Na na ihe ịtụnanya a achọtabeghị ezigbo nkọwa ahụike-sayensị. Ọrụ nke ọgwụ bụ ewepu ọrịa, nke ewepụla ebe a. Nkọwa nke ihe omume ndị a na ihe omume karịrị nke m abụghị ọrụ m, naanị anyị nwere ọrụ nke ewezuga ịme anwansị ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ekpere nke nna John Paul II kụziiri ya, onye na-ekpe ekpere kwa ụbọchị
Next Post → Post ozo:Nraranye nye Nwanyị Nwanyị taa 20 Septemba 2020: aha nsọ nke Meri